उच्च फ्रिक्वेन्सी प्रेरण स्टील वायर टेम्परिंग मशीन
घर / आवेदन / प्रेरणा ताप / प्रेरण इस्पात तार टेम्परिंग
प्रेरण स्टील वायर टेम्परिंग
श्रेणी: प्रेरणा ताप टैग: प्रेरणा टेम्परिंग हीटर किन्नुहोस्, प्रेरणा गर्मी टेम्परिंग, प्रेरणा स्वभाव, प्रेरणा टेम्परिंग हीटर, प्रेरणा टेम्परिंग प्रक्रिया, प्रेरणा समथर सतह, इस्पात तार टेम्परिंग, सतह टेम्परिंग, सतह टेम्परिंग हीटर, तापनि, टेम्परिंग प्रेरण उपकरण, तनाव प्रक्रिया, तार टेम्परिंग प्रेरण
प्रेरण इस्पात तार टेम्परिंग प्रोसी अनुप्रयोग
प्रेरणा स्वरुप के हो?
प्रेरणा टेम्परिंग एक हीटिंग प्रक्रिया हो जुन मेकानिकल गुणहरूलाई अनुकूलन गर्दछ जस्तै workpieces मा कडाई र ductivity जुन पहिले नै कडा गरिएको छ।
हामी उच्च गुणवत्ता, द्रुत मोड, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित गर्दछौं।
HLQ प्रेरण तातो उपचार उद्योग मा एक नेता हो चीन मा प्रेरणा टेम्परिंग सहित, गर्मी उपचार सेवा को एक किस्म प्रदान गर्ने। प्रेरणा टेम्परिंग एक गर्मी उपचार प्रक्रिया सामान्यतया प्रेरण हार्डनिंग प्रक्रिया पूरा भएपछि गरिन्छ। यो एक कम तापमान मा प्रेरणा सख्त प्रक्रिया भन्दा कम प्रदर्शन मा एक इच्छित कडाई को दायरा पुग्न को लागी वा भाग को मजबुतता को वृद्धि गरी ducility बढाइएको छ। इस्पातको इन्डक्शन टेम्परिंग सामान्यतया कम फ्रिक्वेन्सीको साथ गरिन्छ सेकण्डमा परिणामहरू फर्नेस टेम्परिंग अनुप्रयोगहरूको जस्तै समान रूपमा लिन सकिन्छ जुन घण्टा लिन्छ।
प्रेरण हीटिंग एक निरन्तर टेम्परिंग प्रक्रियामा लागू हुन्छ जसमा तार स्टक उत्पादन गतिमा इन्डक्शन कुण्डल मार्फत खुवाइन्छ।
सामाग्री: इस्पात तार mm मीमी देखि १२ मिमी व्यास
तापमान: 1922 ºF (1050 ºC)
फ्रिक्वेन्सी: 90 kHz
प्रेरण तताउने उपकरण: DW-UHF-60 kW, 100 kHz उत्प्रेरित हीटिंग सिस्टम, कम्तिमा २ capF को लागी आठ μ 1.0 μF क्यापेसिटरहरू सहित टाढाको वर्कहेडले सुसज्जित छ
- तीन इन्डक्शन हीटिंग कोइलहरू तारको दायरा कभर गर्नको लागि विशेष गरी यो अनुप्रयोगको लागि डिजाइन र विकसित गरीएको छ
प्रेरणा टेम्परिंग प्रक्रिया:
तारा स्टक एक forty मिटर / मिनेट को दर मा एक चालीस-पालो हेलिकल कोइल मार्फत खुवाइन्छ, टेम्परिंग प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न इच्छित तापमानमा पुग्छ। यस्तै २० मोडको हेलिकल कोइल सबैभन्दा ठूलो तार व्यासको लागि प्रयोग गरिन्छ
सानो व्यासको तारमा निराशाजनक तातो स्थानान्तरणको साथ ग्यासफाइड भट्टीमा stock स्टक फिड-लाइनहरूको मर्मत आवश्यक छ। प्रेरणको लागि %०% कम उर्जा आवश्यक पर्दछ र foot ०% ले उत्पादन-लाइन फुटप्रिन्ट कम गर्दछ
परिणामहरू / लाभहरू प्रेरण हीटिंग प्रदान गर्दछ:
- ताप र सीधा तार मा ताप, ऊर्जा र समय बचत
- उत्पादन लाइन मा सजिलो एकीकरण, थ्रुपुट सुधार
- तातो सटीक नियन्त्रण
- तार भित्र ताप को वितरण
यो कहाँ प्रयोग गरिन्छ?
इन्डक्शन टेम्परिंग व्यापक रूपमा मोटर वाहन उद्योगमा शाफ्ट, बार र जोर्नीहरू जस्ता सतह-कठोर कम्पोनेन्टहरू टेम्पर्डरमा काम गर्दछ। प्रक्रिया ट्यूब र पाइप उद्योगमा कडाई workpieces को माध्यम बाट रिसाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ। प्रेरणा टेम्परिंग कहिलेकाँही कडाई स्टेशन मा प्रदर्शन गरिन्छ, एक पटक वा धेरै अलग टेम्पर स्टेशनहरु मा अन्य पटक।
प्रेरणा टेम्परिंग किन प्रयोग गर्ने?
हाम्रो प्रेरणा टेम्परिंग प्रक्रियाले परिणामहरू छिटो उत्पन्न गर्दछ। कठोर स्टील्सको टेम्परिंग समय र तापमान दुबैको कार्य हो। प्रेरणा टेम्परिंगले छोटो हीटिंग समय (सामान्यतया केवल सेकेन्ड) र उच्च तापक्रम भट्टी टेम्पर्सन उपचारको बराबर परिणामहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गर्दछ जुन प्रायः घण्टा आवश्यक हुन्छ। प्रेरणा टेम्परिंग सबै कठोर घटकहरूमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। नतीजा बृद्धि भएको कठोरता, लचीलापन र प्रभाव शक्तिको साथ एक घटक हो।
को मुख्य फाइदा प्रेरणा स्वभाव गति छ। प्रेरणले मिनेटमा workpieces गुमाउन सक्छ, कहिलेकाँही सेकेन्ड पनि। फर्नेस टेम्परिंगमा सामान्यतया घण्टा लाग्छ। र, किनभने प्रेरणा टेम्परिंग इनलाइन एकीकरणको लागि उत्तम छ, यसले प्रक्रियामा कम्पोनेन्ट्सको संख्यालाई न्यूनतम गर्दछ। प्रेरणा टेम्परिंगले व्यक्तिगत वर्कपीसको गुणस्तर नियन्त्रणको सुविधा पुर्‍याउँछ। एकीकृत इन्डक्शन टेम्पर स्टेशनहरूले मूल्यवान भुइँ स्थान पनि बचत गर्दछ।
प्रेरणा उत्प्रेरक कनवर्टरको अन्त
प्रेरण हीटिंग rivets
प्रेरणा ताप सेटिंग नाइटिनोल
प्रेरणा हीटिंग एल्यूमिनियम